Indawo ethandwa nguHeidi
Molweni zindwendwe ezithandekayo zeeholide.
Ngenxa yemeko yangoku yeCorona, ndingathanda ukukucela ukuba ujonge ulwazi phantsi "kolwazi oluthe vetshe".
Indawo yethu yeeholide ezingama-68 m² ibekwe kumgangatho ophantsi kwindlu yedolophu yase-Art Nouveau eFrau Clara Straße 3.
Inegumbi lokulala kunye nendawo yokuhlala / igumbi lokulala elidibeneyo, ikhitshi kunye negumbi lokuhlambela. Ziinyawo nje ezimbalwa ukuya echwebeni naselwandle.
Ecaleni yizowuni yabahambi ngeenyawo.
Molweni zindwendwe ezithandekayo zeeholide. Indawo yethu ikwindlu yedolophu yaseArt Nouveau eFrau Clara Straße 3.
Le yakhiwa ngo-1905 yiFreemason lodge iLeuchte am Strande.
Siye sayilungisa ngothando indlu.
Sincamathele ukubaluleka okukhulu ekugcineni umlinganiswa we-Art Nouveau kwaye sisesenza indawo yokuhlala "hygge" enazo zonke izinto eziluncedo namhlanje.
Le ndlu inegumbi lokuhlambela elineshawa enkulu, ekumgangatho osezantsi, ikhitshi elipholileyo elikumema ukuba uhlale, igumbi lokulala elibanzi kunye negumbi lokuhlala elibanzi. Kwigumbi lokuhlala sidibanise ibhedi eludongeni.
Indlu inikezela nge-WiFi kuwo onke amagumbi kunye ne-cable TV kwigumbi lokuhlala kunye negumbi lokulala.
Indlu eFrau Clara Straße No. 3 iphakathi kwidolophu yakudala kwaye iyindawo nje yokuphosa ilitye ukusuka echwebeni. Apho unako, phakathi kwezinye izinto, uthenge intlanzi esandul’ ukubanjiswa kumsiki. Ikwangaphantsi nje kwamakhulu amabini anamashumi amahlanu eemitha ukuya elunxwemeni lwe-spa.
Ecaleni yizowuni yabahambi ngeenyawo. Imarike yeveki yenzeka khona rhoqo ngooLwesithathu nangoMgqibelo kwaye ibonelela ngeemveliso ezintsha zengingqi.
Le ndlu yedolophu ilungele iholide "yasimahla yemoto". Ukuba usafuna ukufika nesithuthi sakho, siya kubonelela ngendawo yokupaka kumgama omfutshane. Ngelishwa, akukho ndawo yokupaka kumbindi wesixeko, ngoko ke asinako ukukuyeka kolu hambo lufutshane. Ukulayisha kunye nokukhulula ungaqhuba ngqo ukuya kwigumbi.